Waa maxay New ee Apple macruufka 7.1
In kastoo macruufka 7.1 yimaado iyada oo aan la updates dhulka-gariir, waa update muddo dheer sugayay. Arin shil ku iPhone 5s, hagaajinta user interface, farriimaha cad, dhacdooyinka Calendar fiican, iyo wax cusub:: Waxaa dhab ahaantii wax users u baahan tahay kana soobixiya wax ku daro CarPlay. Waxaan ma hubo sida ay dadku u dareemaan ku saabsan horumarka ama qaababka cusub. Aniga ahaan, waxaan aan wax iska caabin karin jirrabaadda ee isku dayaya qaababka oo dhan oo ay arkeen sida ay u shaqeeyaan. Waxaan durbaba la casriyeeyay 5s iPhone aan u macruufka dambeeyay 7.1.0. Ok, ku xiga, aynu qaadan bidhaamaysa oo ka mid ah hagaajinta ama qaababka cusub oo wax ka bartaan wax waa in aad lacag bixisid si aad hor iyo casriyeeyo aad iPhone in macruufka 7.1 dareenka.
Qaybta 1. macruufka 7.1 Dhibaatooyinka Casriyaynta
Qaybta 2. Waa maxay New ee macruufka 7.1?
Qaybta 3. Sida loo Hagaaji in macruufka 7.1
Qaybta 4. kaabta Your iPhone Ka hor inta Casriyaynta in macruufka 7.1
Qaybta 5. Maxaa la Sameeyaa Haddii iPhone Data ka dib markii Casriyaynta in macruufka 7.1
Qaybta 6. Wondershare Updated Software lagu Taageerayo macruufka 7.1
Qaybta 7. Sida loo JAILBREAK macruufka 7.1?
Su'aasha # 1: Ma suurto gal ah in ay tirtirto fariimaha duwan ee hal mar ku iPhone ka dib markii lagu casriyeeyo si macruufka 71.? Solutions: Sure. Inside thread fariin, ka jaftaa xoogaa yar oo fariin dheer in lagula soo baxo ee "dheeraad ah" arbushin ilaa. Ka dibna waxaad dooran kartaa fariimaha hal-by-ka mid ah si ay u tirtirto waqti.
Su'aasha # 2: Updated in macruufka 7.1 oo ay ogaadeen in aan keyboard jawaab aad si tartiib ah halka touchscreen si deg deg ah jawaab marka waxaan ku furi app ah iyo goobaha. Oo markii aan ku qor, waxa ay u muuqataa waxaan ka dhaqso badan iPhone fahamka shuqullada ahay, sidaas darteed waxaan u leeyihiin in ay mar kale iyo mar kale -isticmaale ee fariimaha. Solutions: Marka aad ka heli keyboard ka jawaabtay si tartiib ah ama aan ka jawaabaan oo dhan, waa in aad dib. Settings tuubada> General> celi iyo dooran celi dictionary keyboard.
Su'aasha # 3: Waxaan updated aan iPhone in macruufka 7.1 maanta. Wax walba waa wanaagsan aan GPS mooyee. GPS waa had iyo jeer ku saabsan sare ee shaashadda. Waxaan isku dayay wax kasta, oo ay ku jiraan billaabeen aan iPhone oo xiray dhammaan codsiyada. Si kastaba ha ahaatee, waa waxtar lahayn. Solutions: Marka aad hesho Adeegga Location (GPS) icon joogi on sare ee shaashada iPhone si ay u dami, waa inaad diyaariso iPhone,. Tubada Settings> Privacy> Adeegyada Goobta, dami adeega goobta oo dhan hal mar, ama waxaad u tagi kartaa adeegyada goobta codsiga kasta dhexe ee suuqa kala. Waxay ku xidhan tahay baahidaada.
Su'aasha # 4: macruufka 7.1 hayaa Hakinta markii sheekaynta, multitasking. Oo markii furitaanka gal ah, ay u dambaysaa. Taaban karaa wax waa relock qalabka! Maxaa qalad ah? Solutions: Wixii xaaladan, waxaa asal ahaan yihiin 2 siyaabaha aad isku dayi kartaa in ay xalliyaan. 1st, oo dhan barnaamijyadooda hoos ku xidhay screen multitask iyo guuleysatey qalab aad. Dad badan ayaa isku dayay sidan, ay u shaqayso. 2nd, soo celiyo qalabka sida oo cusub ah .
Su'aasha # 5. Hayso arrimaha soo jeeda qaar ka mid ah. Waxa ay u muuqataa nuurka on my iPhone 5s sidaas ma aha, oo u dhalaalaya sidii ay ahaan jirtay. Solutions: Dadka qaarkood ayaa kaliya ayaa sheegay in ay xal u helidda dhibaatada by rebooting iPhone. Waxaan kugula talineynaa inaad u tagtaa Settings> General> Helitaanka in ay soo jeedin ah oo ku saabsan iska yaree doorasho Motion. Markaas ka jaftaa Settings> Wallpapers & dhalaalka si ay u dejiyaan nuurka.
# 1. Feature New Big ee macruufka 7.1: CarPlay
The feature caan cusub ee macruufka 7.1 waa CarPlay. Waxaa la abuuray ugu horayn ku salaysan isticmaalka Siri in amro, oo bixiya isticmaala hab sahlan in ay ka jawaabaan taleefan, u yeerin fariimaha qoraalka ah, music maktabadda helaan ka gaari. Kaararka New ka Ferrari, Mercedes-Benz, iyo Volvo taageeri doonaa CarPlay. Iyo Ford oo BMW waxaa lagu ballan-qaaday in ay aad u taageeraan. Haddaba Siri ka taageertaa qaban-ka-hadalka. Waxay ka dhigan tahay ka dib markii aad hoos u qaban button Home ah, waxaad la hadli kartaa weedho dheer la joojoojiyo. Siri ka shaqayn doonta cod amarka ama fariin oo kaliya ka dib marka aad sii daayo button Home ah. Tani waa fiican, ee macruufka 7.1 ka hor, ay ka dhacdo oo dhan wakhtigii ka hor inta aadan ku dhameysteen amarka ah, Siri bilaabeen in ay ka shaqeeyaan.
Badan oo ku saabsan CarPlay Baro, oo booqday goobaha rasmiga ah ee Apple CarPlay >>
# 2. Fix Random shil
Haddii uu jiro hal wax oo macruufka 7 ayaa pissed off users ka, waxa laga yaabaa in shilka random oo iPhone 5S, iPad Air iyo iPad mini la isha ee isticmaala Display ayaa la kulma. Cayayaanka Tani jiray ilaa la sii daayo macruufka 7. Waa sababta keentay shilka screen guri ah oo sabab la'aan. Bishii Janaayo, Apple xaqiijiyay in Mashable in arin a for "Screen White of Death" waxay ahayd in update soo socda . Ugu dambayntiina waxa ay halkan waa. Ka dib markii aan la casriyeeyay si macruufka 7.1, waxaan helay 5s iPhone aan ka jawaabo si dhakhso ah oo socon dheeraad ah si habsami leh. Oo anigu waxaan isku dayay multi-shaqo, waxaa jiray shil ku jirin innaba. Markaasaa taas loo soo sheegay in horumar this adag qaab loogu iPhone 4 sidoo kale.
# 3.Notifications Clear Durba
Wargalinta waa ay wanaagsan tahay marka aan u baahanahay in la ogeysiiyo in uu jiro wax cusub ama wax aan u baahanahay in la sameeyo. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad isku aragto labo ama in ka badan aaladaha Apple, aad laga yaabo in aysan diyaar u tahay in ay nadiifiso ah farriimaha la mid ah oo ku saabsan mid kasta oo ka mid ah qalabka macruufka aad. macruufka 7.1 cadda doonaa ogeysiin ku saabsan qalabka macruufka kale. Marka jawaabay wac FaceTime ah oo ku saabsan mid ka mid ah aaladaha aad, ogeysiis isla qalab kale oo la ogolaaday. Habkaani waa u iMessage heli karo.
# 4.Better Calendar Dhacdooyinka & uga faaidaysan Camera
In macruufka 7.1, Apple ayaa kor u bandhigay ee Calendar Dhacdooyinka, taas oo quruxsan fudud u isticmaala si aad u aragto liiska jadwalka isaga ama iyada. Ka dib markii dhejinta waaraadka maalin keliya iyo dhejinta waaraadka icon liiska, waxaa muujin doonaa dhammaan dhacdooyinka ee maalinta ugu hooseysa. Marka arkaysid dhacdooyinka muddo bil ah, kaliya waxay u baahan yihiin in ay ka jaftaa icon liiska on sare ee bisha ugu waxyooda liiska oo dhan. Waxaa jira qaadey ah dejinta loogu app Camera ee iPhone 5S ah. Ka hor, dadka isticmaala waxay u baahan yihiin in ay soo jeedin ama dibadda ikhtiyaarka gacanta. Haddaba macruufka 7.1, marka aad dhigay auto soo qaadey, waxaa la isticmaali doonaa marka aad isku dayayso in ay shot sawir ama sanam la ogaado.
# 5.Accessibility: Motion yaree & Text customizable
Habkaani wuxuu ku kala aallada macruufka ah ayaa laga yaabaa in mooshinka snazzy halka ka mid ah hawlaha bedesheen. Si kastaba ha ahaatee, dadka qaar ay dareemaan xanuun waxaa ka mid ah. Haddaba macruufka 7.1, users noqon karaa doorasho mooshin ay suuragelinayo in la yareeyo Motion, samaynta qalabka macruufka ah halkii ma guurto ah. Oo haddii aad leedahay wax dhibaato ah oo akhrinaya qoraalka aad iPhone, waxa kale oo aad ka dhigi kartaa qoraalka weyn oo soo dhiiranayaan. Riix Settings> General> Helitaanka . Laga soo bilaabo halkan, jaftaa Nooca waaweyn si ay u dejiyaan text size sanyihiin ama awood tirada Helitaanka waaweyn .
Kor ku soo sheegnay ayaa ah horumar ugu muhiimsan ee macruufka 7.1. Haddii aad u baahan tahay inaad wax badan oo ku saabsan waxa cusub ee macruufka 7.1 bartaan, waxaad samayn kartaa booqo goobta xafiiska Apple ee halkan .
Asal ahaan, waxaa jira siyaabo 2 si aad u cusboonaysiiso macruufka u macruufka dambeeyay 7.1. Waxay qaadataa 4 ama 5 daqiiqo ah u isticmaala si aad u cusboonaysiiso si macruufka 7.1, inta badan waxay ku xiran tahay shabakad aad isticmaalayso. By jidkii, ma waxa version of macruufka aad isticmaalayso arrinta, waxaad si toos ah u cusboonaynta kartaa in macruufka 7.1, boodbood macruufka ah 7.0.6.
Tallaabada 1. Isku qalab macruufka la computer, kuwaas oo waa in ay leeyihiin Lugood preinstalled via cable USB ah.
Tallaabada 2. Lugood Daahfurka on your computer. Markaas waa inuu jiraa pop ah ilaa, ku waydiinaya inaad u cusboonaynta in macruufka 7.1. Waa in aad guji Download iyo Update . Waxaa laga yaabaa in aad qaadan doonaa xoogaa daqiiqo ah si ay u soo bixi macruufka 7.1. Ka dib dajinta, Lugood idinku wadi doonaa in geeddi-socodka lagu casriyeeyo qalab macruufka in macruufka 7.1.
#Via Your Device macruufka:
Waa mid aad u fudud. Settings tuubada> General> macruufka download 7.1 oo ku xidh ku saabsan qalabka macruufka.
Casriyaynta in macruufka 7.1 waa mid aad u fudud. Si kastaba ha ahaatee, waxa ay yeeli doonaan haddii aad ogaato in aad xogta laga badiyay marka lagu casriyeeyo si macruufka 7.1. Si looga fogaado xogta lumin shilalka, ka hor inta casriyeeyo si macruufka 7.1, waxaad jeclaan qalab macruufka fiican gurmad:
SMS kaabta ka hor Casriyaynta in macruufka 7
Haddii aadan ku filan nasiib xogta laga badiyay marka lagu casriyeeyo si macruufka 7.1, waxaad soo celin karaa xogta ka kaabta Lugood haddii aad taageeray qalab macruufka ku xusan Qaybta 2. Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah xal u noqon kara mid wax tar leh:
Wondershare MobileTrans - content Transfer dhexeeya iPhone, Android, BlackBerry iyo Nokia. Sidaa daraadeed, waxa aad helaysaa dhibaato ma wareejinta fariimaha qoraalka ah, xiriirada, music, videos, sawiro, iyo ka badan si aad iPhone ka dib markii aad casriyeeyo si macruufka 7.1.
Wondershare TunesGo - Transfer Music ka iPhone, iPod, iyo iPad in Lugood iyo Computer caqligiisu. Ka sokow isticmaalaya sifooyinka Lugood ma laha, weli waa aad isticmaali karto si aad u hagaagsan files si toos ah uga your computer si aad macruufka 7.1 qalabka aan u hagaagsan Lugood. Oo haddii aad aan u hagaagsan kartaa music in aad qalab macruufka ah ka dib markii lagu casriyeeyo si macruufka 7.1 , aad awoodaan in ay aad u gaarto goolkii la qalab this.
Wondershare Dr.Fone - The World ayaa hore iPhone, iPad iyo iPod xiriiri software kabashada xogta inuu ka soo kabsado xiriirada lumay, fariimaha qoraalka ah, sawirada, qoraalo, iyo wax ka badan. Haddii aad taageeray qalab macruufka hor casriyeeyo si macruufka 7.1, ka dib markaas, waxaad ka heli kartaa macluumaadka lumay ka kaabta Lugood ama kaabta iCould la Wondershare Dr.Fone. Oo weliba inta lagu jiro muddada la isticmaalayo macruufka 7.1, haddii aad laga badiyay ama tirtirto wax muhiim ah, waxaad isku dayi kartaa Wondershare Dr.Fone inay dib u hesho sidoo kale. Baro sida loo isticmaalo iyo nooca faylasha ay taageerto >>
Wondershare SafeEraser - hortago tuugada aqoonsiga ka iPhone, iPad iyo iPod xiriiri 1-riix "Suuliyada nadiif ah" ilaaliyo ee badbaadinta kama dambaysta gaarka ah. Sida ay magaca uu tusinayaa, waxa ay kaa caawinaysaa in aad u masixi wax walba oo ku saabsan qalab ay kaaga caawiso inaad ilaaliso arimahaaga gaarka ah.
Qaar badan oo macruufka jailbroken users walaac ku saabsan in ay macquul tahay in JAILBREAK macruufka 7.1. Xaqiiqdu waxay tahay in macruufka 7.1 jaamaha Qiyaanada 7, taas oo macnaheedu yahay ka dib markii aad casriyeeyo si macruufka 7.1, ma aad xabsi jebin kartaa qalab macruufka la Evasi0n 7. Apple ayaa uga mahadceliyey kooxda evad3rs jailbreaking magac u helidda cayayaanka ammaanka oo lagu go'an ee macruufka 7.1. Oo weliba haddii ay jiraan qaar ka mid ah cayayaanka ammaanka faa'idaysto by Anonymous, sidii ay bari ahaan jirtay, waa inaad sugto dhowr bilood mar kale ay bartaan sida loo JAILBREAK macruufka 7.1.
iPhone xayiran Recovery Mode Marka Casriyaynta in macruufka 9
Sida loo iPhone kaabta Ka hor inta jailbreaking iPhone
Sida loo Delete iPhone Data oo aan laga badinin jailbreak
Sida loo soo celiya iPad ka dib jailbreak
Sidee si ay u haajiraan ka Old iPod in iPod Cusub?
Sida loo soo celiya iPhone ka dib jailbreak
> Resource > macruufka > Waa maxay New ee Apple macruufka 7.1 iyo arrimaha u baahan tahay inaad fiiro